Rw Kheyre & MD Deni oo guddi min 9 xubnooda u kala…
By axadle On Jul 12, 2020
Ra’iisal wasarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax ayaa maanta ku geeriyooday magaalada Ankara ee dalka Turkiga oo uu mudooyinkaan dambe ku xanuunsanaa sida eheladiisa ay u sheegeen Axadle.
Dhamashadiisa ka dib waxaa ka tacsiyay Hogamiyaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre, Madaxweynayaasha Maamul goboleedyada iyo siyaasiyiin Soomaaliyeed qoorkood.
Balse arinta layaabka le ah ayaa ah in Ra’iisul wasaaraha Soomaaliiya Xasan Cali Kheyre iyo Hogamiyaha Puntland ay kala magacaabaan labo guddi oo ka shaqaynaya in Ra’iisul wasaarihii hore loo sameeyo aas qaran.
Ra’isulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa magacaabay guddiga diyaarinta aaska qaran ee marxuum Xasan abshir faarax Ra’isulwasaarihii hore ee dalka waxaana guddigu uu ka kooban yahay oo gudoomiye u yahay Ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed.
Saacado ka dib magacaabista guddigaan ayaa Hogamiyaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, uu magacaabay guddi aas qaran Garowe ugu sameynaya Alle ha u naxariistee Ra’iisal wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax iyo hogamiyihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi.
Guddiga uu Madaxweynuhu magacaabay oo iyaguna ka kooban 9 ayaa kala ah:-